Maqaal: Sababta Itoobiya ay u garab taagan tahay dowladda dhexe ee Somaliya! | HalQaran.com
Home Opinion Maqaal: Sababta Itoobiya ay u garab taagan tahay dowladda dhexe ee Somaliya!
Maqaal: Sababta Itoobiya ay u garab taagan tahay dowladda dhexe ee Somaliya!
Maqaal (Halqaran.com) – Tan iyo intuu xukunka qabtay mudane Abiy Axmed, waxaa muuqday isu soo dhawaansho labada dowladood ah. Waxaa abuurmay jawi Isfahan oo u muuqday mid ku dhisan is qaddarin iyo sinnaan. Waxaa billowday wadahadallo ku saabsan midaynta dhaqaalaha iyo fududaynta isu socodka dadka. Waxay guda galeen dhisidda isbahaysi saddex geesood ah oo labadaan dal iyo Eritareeya ku midaysan yihiin.
dowladda dhexe ee Soomaaliya!!
u garab taagan tahay